မေ 2019 | တစ်ဦးကရထား Save
လ: မေ 2019
နေအိမ် > မေ 2019
စာဖတ်ချိန်:4မိနစ်များ ဘော်ဒါဆောင်ညစ်ပတ်ဖြစ်ခြင်းများအတွက်မကောင်းတဲ့ရက်ပ်ခဲ့ကြ, မှိန်, နှင့် stinky. သို့သော်သင်ကဘော်ဒါဆောင်များကိုအဆင့်မြှင့်တင်ပြီဆိုတာသင်သိပါသလား? နေထိုင်ရန်အဆောင်များတွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာမသိရပါဘူးသူများအတွက်, ဟိုတယ်ကိုလွဲမှားစွာမရေးဘဲကျွန်တော်နှင့်အတူပြေးခဲ့သည်. ဘော်ဒါဆောင်စျေးပေါနေရာထိုင်ခင်းများမှာ…
စာဖတ်ချိန်:5မိနစ်များ ဘယ်အချိန်မှာဥရောပအကောင်းဆုံးစပျစ်သီးကိုစတိုးဆိုင်၏ search အတွက်, သငျသညျသူတို့အား timeless အပိုင်းပိုင်းများအတွက်မြျှောအပေါ်မသာနေ. သင်တို့သည်လည်းမှတ်ဉာဏ်လမ်းသွားဆင်းခရီးကိုယူပြီးနှင့်သမိုင်းရှာဖွေစူးစမ်းနေ. တစ်ဦးကစပျစ်သီးကိုစတိုးဆိုင်တစ်ဖက်ရှင်ပြတိုက်ကဲ့သို့ပင်နိုင်ငံရေးပါတီများကင်းမဲ့ဖြစ်ပါသည်, indicative ofacity’s culture…